Booliska Mandera oo loo ogolaaday in ay 14 maalmood gacanta kusii hayaan nin loo heysto argagixisnimo – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska Mandera oo loo ogolaaday in ay 14 maalmood gacanta kusii hayaan nin loo heysto argagixisnimo
Star FM September 15, 2016
Maxkamad uu fadhigeedu yahay magaalada Mandera ayaa u ogolaatay laanta la dagaalanka argagixisada ee booliska in ay muddo 14 maalmood ah oo kale gacanta kusii hayaan nin loo heysto eedeymo la xiriira argagixisanimo.
Garsoorka ayaa u fasaxay booliska in ay waqtigaas kusoo dhameystiraan baaritaannada ka dhanka ah eedeysanahaasi, ka hor inta aan maxkamadda la soo taagin.
Simon Kariuki oo ka tirsan booliska ayaa maxkamadda u sheegay in ay u baahanyihiin waqti dheeraad ah oo ay ku ballaariyaan baaritaannada lagu hayo ninka la tuhunsanyahay oo lagu magacaabo Simon Karuga Gitau, oo kasoo jeeda maamul goboleedka Kirinyaga.
Gitau ayaa xabsiga loo taxaabay 11-ki bishaan September xili uu ku sugnaa meel u dhow xadka u dhexeeya Kenya iyo Somalia, waxaana isla markaasi loo gacan galiyay booliska Kenya oo kusii wareejiyay waxda la dagaalanka argagixisada ee booliska.
Ninkaan ayaa laga shakisan yahay in uu gacan saar la leeyahay al shabab, xiliga la xirayayna uu ku wajahnaa Somalia si uu ugu biro al shabab oo fadhigeedu yahay Somalia.
Dabayaaqada bishaan ayaa lagu wadaa in uu Gitau oo 32 sano jir ah ka soo hor muuqdo maxkamadda, si uu u wajaho dacwadda ka dhanka ah.
← Hoggaamiye kooxeedka Liibya oo qabsaday Xarumaha Shidaalka iyo Beesha Caalamka oo cambaareysay
Arday dhiganaayay jaamacada Kimathi oo ku dhintay wabi ku yaalla Nyeri →